Mailing List တွင် မှတ်ပုံတင်ပါ | Dhammaloka Buddhist Society
CONTACT US - (VIA E-MAIL FORM)
Categorized | Subscribe
Tags | Subscribe
Mailing List တွင် မှတ်ပုံတင်ပါ
Posted on 22 April 2010 by Linn
ယခင်က ကျွန်တော်များ ဓမ္မာလောက ဗုဒ္မဘာသာ အသင်းမှ ဖိတ်စာများ၊ ဓမ္မစာပေများ၊ သတင်းများကို ပုံမှန် Email ကိုအသုံးပြု၍ ဓမ္မမိတ်ဆွေများထံ ဖြန့်ဝေမှုပြုခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ဖြန့်ဝေရာတွင် ဓမ္မမိတ်ဆွေများ၏ Email လိပ်စာများအားလုံးကို စုပေါင်း၍ အသုံးပြုရခြင်းကြောင့် လွယ်ကူမှုရှိသော်လည်း အားနည်းချက်များ ရှိနေပါသေးသည်။
(ဥပမာ-မလိုလားအပ်သော Spam Mail, Junk Mail များ ရရှိရန် အခွင့်အလမ်းပိုများပါသည်၊ လက်ခံရရှိသူအားလုံးမှ Email လိပ်စာများအားလုံးကို သိရှိနေမှုကြောင့် လုံခြုံမှုအားနည်းပါသည်။)
ထိုကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော Mailing List ပြုလုပ်၍ ဖြန့်ဝေရန် စဉ်းစားခဲ့ကြပြီး ယခုဆိုလျှင် ဓမ္မမိတ်ဆွေများ၏ Email လိပ်စာများကို DBSUSA Website ပေါ်တွင် လွယ်ကူစွာ (Subscribe) မှတ်ပုံတင်၍ အသင်းမှ ဖိတ်စာများ၊ ဓမ္မစာပေများ၊ သတင်းများကို လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။
ထိုသို့ Subcribe ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်-
(၁) ပို့သူ DBSUSA.ORG နှင့် လက်ခံရယူသူ တို့၏ Email လိပ်စာ နှစ်ခုတည်းသာ Email တွင်ပါရှိမည် ဖြစ်ပါသည်၊
(၂) အသင်း၏ Mailing List တွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပြန်ဖျက်ခြင်း (Subcribe & Unsubscribe) ကို Website ပေါ်တွင် အချိန်မရွေးပြုလုပ်နိုင်ပါသည်၊
(၃) Website ပေါ်တွင် အသစ်တင်ရှိသော အကြောင်းအရာများကို အလိုအလျောက် ချက်ခြင်း လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်သောကြောင့် Website တွင်လာရောက် ရှာဖွေနေစရာ အချိန်မကုန်တော့ပါ၊
(၄) ကျောင်းတွင် ပြုလုပ်သော တရားပွဲများ၊ လူမှုရေးပွဲ ဖိတ်စာများကို အချိန်မီ ရရှိနိုင်ပါမည်။
Instruction (Website ပေါ်တွင် မှတ်ပုံတင်နည်း)
(၁) Email လိပ်စာ မှန်ကန်စွာဖြည့်၍ (Subscribe) ကို နှိပ်ပါ၊
(၂) သင့်၏ Email တွင် Welcome Email တစ်စောင် အလိုအလျောက်လက်ခံရရှိနေပါလိမ့်မည်၊ ထို Email ကိုဖွင့်၍ ပါရှိသော Confirmation Link ကို click နှိပ်၍ Confirm လုပ်ပါ၊
(၃) ယခုဆိုလျှင် ဖိတ်စာများ၊ Post အသစ်များကို အလိုအလျောက် လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည်၊
Note: အချို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ၏ Email လိပ်စာများကို ကျွန်တော်များ၏ Mailing List တွင်ထည့်ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်၊ မိမိ Email ၏ Inbox ကိုဖွင့်၍ DBSUSA မှ Welcome Letter ကိုရှာပြီး Confirm ပြုလုပ်ရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။ မတွေ့ပါက အထက်ဖေါ်ပြပါနည်း အတိုင်း Subscribe လုပ်ပါ၊
April 24th, 2010 at 11:00 pm
this is so convenience. thank you
April 25th, 2010 at 6:10 pm
YE NAING Says:
April 25th, 2010 at 8:14 pm
I WISH , WILL BE BETTER THAN BEFORE .
Thein Aun Says:
March 5th, 2011 at 1:52 pm
မောင်ကျော်သူ: တရားတော်တွေကို ရနိုင်သလောက်စုံလင်အောင်တင်ထားပေးတဲ...
ayemin: thank you....
Thein Aun: thart tawar hman tha yuei tayar twayh chan myayh...
Thein Aun: သာဓု သာဓု သာဓု...
Dhammaloka Newsletter No.6(ဓမ္မာလောကသတင်းစာစောင် အမှတ် ၆)
Buddha’s Way of Life (ယဉ်ကျေးလိမ်မာ ဗုဒ္ဓသာသနာ)
Dhammaloka News Journal No.5(ဓမ္မာလောကသတင်းစာစောင်အမှတ် ၅)
Maha Satippathana (မဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်)
Myat PaHtan Book (နက်နဲထူးဆန်းမြတ်ပဋ္ဌာန်း)
Abbhidhammar Course (မြတ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာ သင်တန်း)
Dhammalight Journal (ဓမ္မရောင်ခြည်စာစောင်) အမှတ် ၁
Invitation to Dhamma Talk by Ashin Kumara BiVamsa
Invitation to Dhamma Talk by Sayadaw AriyaVamsa (တရားနာရန်ဖိတ်ကြားခြင်း)
Weekly cultural and prayer invitation (အပတ်စဉ်ယဉ်ကျေးမုသင်တန်းနှင့်ဝတ်ရွတ်စဉ်)
2008 calendar apr 25 2009 articles Aug 2008 DBS Dec62008 Dec 13 2008 Dec 27 2008 Dhammaloka Download Feb72009 Feb 14 2009 Feb 21 2009 Feb 28 2009 Invitation Jan32009 Jan 10 2009 July 2009 Mar-28-2009 Mar72009 Mar 14 2009 Mar 21 2009 May 30 2009 monastery Nov 22 2008 Oct42008 Oct 11 2008 Oct 25 2008 PC pictures school Sep 20 2008 Sep 27 2008 Sitagu Talks Thanwayzaniya video video Waso Webcast Zawgyi ဆရာတော်အရှင်ဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ အရှင်ဥာဏိဿရ ဦးဥတ္တမသာရ အောင်ခြင်း ရှစ်ပါး ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
Dhamma Talk (9)
Picture Gallery (16)
Copyright © Dhammaloka Buddhist Society. Home | Web-mail | Webcast Live! | Location | Contact Us | Login |